Su'aalaha La Weydiiyo - Jinan Zhancheng Qalabaynta Qalabka Co., Ltd.
A1: 1 dammaanad tayo sanad leh, mashiinka leh qaybo muhiim ah (marka laga reebo alaabada la isticmaalo) waa la badalayaa iyada oo aan lacag laga qaadin (qaybo ka mid ah ayaa la ilaalin doonaa) markii dhibaato jirto inta lagu jiro muddada damaanada.
S2: Ma ogi midka igu habboon aniga?
J2: Fadlan ii sheeg taada
2) Qalabka iyo Goynta dhumucda: dooro awoodda ugu habboon.
A3: dammaanadda ganacsiga Alibaba / T / T / West Union / Paypal / L / C / Cash iyo wixii la mid ah.
S4: Ma haysaa dukumiinti CE ah iyo dukumiintiyo kale oo lagu nadiifinayo kastamka?
J4: Haa, waxaan haysanaa Asal. Marka ugu horeysa waanu ku tusi doonaa oo Markaad rarto kadib waxaan ku siin doonaa CE / FDA / Shahaadada asalka / liiska xirxirida / qaansheegadka ganacsiga / qandaraaska iibka ee nadiifinta kastamka.
Q5: Ma aqaano sida loo isticmaalo ka dib markaan helo Mise dhibaato ayaan ku qabaa inta lagu jiro isticmaalka, sida loo sameeyo?
1) Waxaan haynaa buug gacmeed faahfaahsan oo leh sawirro iyo fiidiyoow, waxaad ku baran kartaa tallaabo tallaabo.
2) Haddii aad wax dhibaato ah qabtid inta lagu jiro isticmaalka, waxaad u baahan tahay farsamayaqaankeenna si uu u xukumo dhibaatada meelo kale annaga ayaa xallin doonna. Waxaan ku siin karnaa daawadayaasha kooxda / Whatsapp / Email / Telefoon / Skype oo leh kamarad illaa intaada oo dhan
3) Marwalba waa lagusoo dhaweynayaa warshadeena tababarkuna waa bilaash.
Q6: Wakhtiga la bixinaayo
A6: Qaabeynta guud: 7 maalmood. Loo habeeyay: 7-10 maalmood oo shaqo.
Q7: Isbarbardhig bixiyaha kale, waa maxay faa'iidada shirkaddaadu?
J7: Toban sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan warshadaha laser-ka. Injineerada xirfadleyda ah waxay taageeraan baahiyahaaga.
Q8: Isbarbardhig alaab-qeybiye kale, waa maxay faa'iidada mashiinkaagu?
Dhammaan qaybaha aan isticmaalno waa asalka, sumadda caanka ah ee xulashada: Raycus; JPT; MAX.
Waxaanan ku qancin karnaa dhammaan dalabaadkaaga ku habboonaanta.
S9: Sidee loo doortaa leysarka ku habboon?
Fiber laser waxaa si wanaagsan loogu isticmaalaa ku dhowaad dhammaan walxaha birta ah, sida birta birta ah, aluminium, iwm.
Leysarka CO2 ayaa ku habboon alaabada aan birta ahayn, sida alwaax, maqaar, iwm.
UV laser waa labadaba biraha iyo biraha, gaar ahaan muraayadaha, muraayadda.
Waxaan taageernaa adeegga sameynta muunad bilaashka ah, haddii aadan hubin natiijada calaamadeynta, waan kuu tijaabin doonaa.
S10: Waxaan jeclaan lahaa inaan ku iibiyo badeecadaada maxaliga ah, sidee baan u noqdaa qeybiyahaaga?
A10: Waxaan leenahay nidaam hay'ad si wanaagsan loo dhisay, waxaan ku faraxsanahay inaan kula shaqeyno, haddii aad rabto inaad noo noqoto qaybiyaha, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho xal faahfaahsan.